Faah-faahin dheeraad ah oo kasoo baxaya gaari miino lagu rakibay oo caawa ku qarxay degmada Waaberi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah-faahin dheeraad ah oo kasoo baxaya gaari miino lagu rakibay oo caawa ku qarxay degmada Waaberi
Waxaa faah-faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo caawa ka dhacay agaagarka isgoyska Dabka ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaas oo ahaa mid loo adeegsaday gaari miino lagu rakibay ayaa sida la sheeegay geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac leh, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay 1 qof, iyadoona sidoo kale ku dhaawacantay ilaa 3 kale.
Qofka ku dhintay ayaa la sheegayaa inuu ahaa wiil yar oo magaciisa lagu sheegay Ismaaciil Cabdi Sharad islamarkaana ka shaqeynayay goob maqaaxi ah oo ku taala agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay.
Dhinaca kale, taliska booliska degmada Waaberi iyo ciidamada amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa halkaasi ka sameeyay baaritaano aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxa caawa ka dhacay agagaarka isgoyska Dabka ee degmada Waaberi ayaa kusoo beegmaya iyadoo maanta laba qarax iyo weerar lagu qaaday xarunta dambi baarista ciidanka booliska CID-da, kaas oo ay ku geeriyootay ilaa 13 qof oo 7 ka mid ah ay ahaayeen kooxihii weerarka soo qaaday.